Let's talk about IT: Why CentOS ?
System Engineer ဒါမှမဟုတ် Unix / Linux engineer လုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ထားရင် Ubuntu လို OS မျိုးထက် CentOS ကို ပိုလေ့လာဖို့ ပြောဖူးပါတယ်။ ဘာလို့လည်း ? Ubuntu လည်း Server သုံးလို့ရတယ်၊ Debian လည်း တော်တော်ကောင်းတယ်၊ CentOS က ဘာပိုသာသလည်း ?
ဒီလိုမေးရင်တော့ Technically ဘာမှ ပိုမသာဘူး လို့ပဲဖြေရပါမယ်။ Package update တွေမှာဆိုလည်း Debian / Ubuntu ကပိုမြန်တယ်။ Ubuntu နဲ့ Debian မှာဆိုရင်တော့ Server အတွက်ဆိုရင် Debian ကပိုကောင်းနေပါသေးတယ်။ Free Opensource ဖြစ်ချင်း community အားကောင်းခြင်းတွေကြောင့် Debian နဲ့ Ubuntu က SME server တွေမှာ Redhat / CentOS ထက် နေရာပိုယူလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်.... ဒါဟာ စာလုံးကြီးကြီးနဲ့ ရေးသင့်တယ့် 'ဒါပေမယ့်'ပါ ..
Enterprise environment တွေမှာ Redhat ကို ကျော်နိုင်တယ့် Linux မရှိသေးဘူးလို့ပဲ ပြောရပါမယ်။ Commercial support ဆိုတာကို ခဏမေ့ထားပြီး server တစ်ခုအတွက် တခြားအကြောင်းအရာတွေကို ထဲ့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ Enterprise ကြီးတစ်ခုရဲ့ database server လို့ပြောရင် MySQL , PostgreSQL တို့မဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ Oracle ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်၊ IBM DB2 လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်၊ ဒီလို giant commercial product ကြီးတွေက သူတို့ product အတွက် support ကို branded OS တွေအတွက်ပဲ ပေးပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ Oracle က AIX , HP-UX မှာပဲ support လုပ်တယ်လို့ ပြောထားရင် ၊ တခြား OS မှာသွင်းလို့ ဖြစ်သမျှ ပြသနာကို သူတို့တာဝန်မယူပါဘူး။ သုံးနေရင်းနဲ့မှ ဖြစ်ရင် သူတို့ product က ပြသနာဆိုရင်တောင် unsupported configuration ဆိုပြီး technical support ပေးဖို့ ငြင်းနိုင်ပါတယ်။ User ဘက်က supported hardware / supported OS မှာမသုံးရင် သူတို့ ပြသနာမဟုတ်ဖူးလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ အဲတော့လည်း Enterprise company ကြီးတွေက အမှားမခံနိုင်တယ့် Server တွေမှာ branded OS ကြီးတွေသုံးဖို့ပဲ စဉ်းစားပါတယ်။ ဒါက Redhat ပိုနေရာရရခြင်း အကြောင်းတစ်ခု။
နောက်တစ်ခုက stability ပါ။ Redhat မှာ fancy new stuffs တွေမပါပါဘူး။ Package တိုင်းက နောက်ဆုံး up to date ကိုမရနိုင်ပါဘူး။ ဒါက drawback လို့ပြောလို့လည်း ရပါတယ်။ လုံးဝ stable လို့သတ်မှတ်တယ့် version အထိပဲ ပေးပါတယ်။ New feature တွေကိုစမ်းသပ်ပြီး အဆင်ပြေရင်တော့ back ported လုပ်ပေးပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက Support။ Commercial Support ဆိုတာ ပိုက်ဆံပေးရတာကိုပဲ တွက်လို့မရပါဘူး။ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် နောက်မှာ ဒီ product ကို specialize လုပ်တဲ့ expert တွေရှိတယ်လို့ စိတ်ထဲထားလို့ရပါတယ်။ Red Hat ရဲ့ L3 support တွေက အများအားဖြင့် RH ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာအပိုင်းကို in and out သိတဲ့သူတွေပါ။ ဒါ Commercial Support တော်တော်များများ အတူတူပါပဲ။ အဲဒီအတွက် ပြသနာ တော်တော်များများကို နောက်ဆုံး ကိုယ့် IT team က မဖြေရှင်းနိုင်ရင်တောင်၊ သက်ဆိုင်ရာ support team က ကူညီနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်လို့ရပါတယ်။
ဒါတွေက MNC တွေ Enterprise company ကြီးတွေက Red Hat ကို Debian ထက် ပိုသုံးတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲက တချို့ပါ။ အဲတော့ Debian ကိုကျွမ်းကျင်တာထက် Red Hat ကျွမ်းကျင်တာက Big sh*t company ကြီးတွေက ခေါ်တယ့် အလုပ်တွေနဲ့ ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် CentOS ကိုလေ့လာတာက ပိုပြီး အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ (SuSE လေလာချင်ရင်လည်း OpenSuSE လေ့လာပါ။ )
တကယ်တမ်း Red Hat expertise လို့ ပြောရင် OS တစ်ခုထဲနဲ့ မရပါဘူး။ JBoss လို့ middleware တွေ၊ RH Cluster တွေ၊ RHN Satellite တို့ product တွေပါ သိဖို့ လိုလာမှာပါ။ ဒါက Career အရ နောက်မှ Advance ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီ post က နိုင်ငံခြားကို ထွက်ပြီး အလုပ်ရှာဖို့ ရည်ရွယ်ထားကြတဲ့ Administrator level အတွက်ကို ရည်ရွယ်တာပါ။ Linux ကို Career အဖြစ်ရွေးချင်တယ်ဆိုပြီး ၊ ဒါပေမဲ့ လေ့လာတာ မှားနေရင် အလုပ်ရှာရင် အခက်အခဲလေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားကို ထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်ကြရင် အလုပ်ဝင်ဝင်ချင်းမှာ ရှိတတ်တဲ့ stress နဲ့ ကိုယ်သေချာမသိတာကို စမ်းတဝါးဝါးလုပ်ရရင် ဖြစ်တဲ့ stress က တချို့ကို လက်မြှောက်ပြီးပြန်ချင်လောက်အောင်ဖြစ်စေတဲ့အထိ ဆိုးပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Linux သမားလုပ်ချင်တယ်၊ နိုင်ငံခြားထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ CentOS ကိုလေ့လာဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
ဒီ စာက ရေးထားတာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ကပါ ။ Linux တစ်ရပ်စာ မျော်စင် post သုံးခုပြီးတော့ ရေးထားတာ။ အခု စာပြန်ရေးမည်စဉ်းစားတော့ ဘာရေးရမှန်းမသိလို့ ဒါကို ပြန်ရှာပြီး တင်လိုက်တယ် ဟဲဟဲ ။ စာပြန်ရေးဖို့ ကြိုးစားပါအုန်းမယ် ။
Posted by Divinity at 8:30 PM
Labels: CentOS, Divinity, Linux, Red Hat
ဆက်ရေးဖို့ ဆက်ကြိုးစားပါ။ လူတွေများ .. ကြီးလေပျင်းလေဖြစ်လာပြီး ကြီးပြင်း/ပျင်းကုန်ကြတယ်ထင်ပါရဲ့။
ဪ ssh logon attempt တွေ